स्वरोजगार समय र आम्दानिको मालिक | गृहपृष्ठ
Home रोजगारी स्वरोजगार समय र आम्दानिको मालिक
on: १६ बैशाख २०७३, बिहीबार ००:०० रोजगारी
स्वरोजगार समय र आम्दानिको मालिक
काठमाडौं । नेपाली जनताको क्रयशक्ति कमजोर भएका कारण विभिन्न व्यवसायको प्रगति हुन सकेको छैन । ससाना पूँजीमा सञ्चालन हुने व्यवसायको व्यापार नभएको गुनासो व्यवसायीको छ । यसकारण ससाना व्यवसायमा काम गर्ने जागीरदारको पनि भविष्य छैन ।
जागीरमा भविष्य नभएकै कारणले आफूले कमाएको पैसा खर्च नगरीकन बचत गर्ने प्रवृत्ति प्रत्येक नेपालीको छ । खर्चमा मितव्ययिता अपनाइने कारणले दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको व्यवस्थामा बाहेक अन्यत्र सफलता पाउन सकिने अवस्था छैन ।
अरूको नोकरी गर्दा हुने भविष्य अनिश्चितताबाट बच्नकै लागि आफ्नै व्यवसाय थाल्नु राम्रो हुन्छ । यद्यपि, आफ्नै व्यवसाय थाल्नुअघि भने बजारको अध्ययन–अनुसन्धान गर्नु अपरिहार्य छ । अधिकांश नेपालीको ‘अक्कल नपु¥याई नक्कल’ गर्ने प्रवृत्ति छ । फलानोले पसल राख्यो भने कुरै नबुझी पसल राख्दा डुबेकाहरू धेरै भेटिन्छन् । अनि फेरि जागीर खोज्ने वा विदेश जाने सपना देख्न थाल्छन् ।
नेपालमा बढ्दो बेरोजगारी र आर्थिक अभावका कारण अधिकांशले चाहेको रोजगारी पाउन सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले, आफ्नो मालिक आफै हुनका स्वरोजगारमूलक व्यवसाय गर्नु उत्तम विकल्प हो । स्वरोजगारमूलक व्यवसायले महीना दिन गन्दै तलब पर्खर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति दिनुका साथै आर्थिक रूपमा आफूलाई बलियो बनाउँछ । स्वरोजगार बन्नु भनेको काम, समय र आम्दानीको मालिक आफै हुनु हो ।
नेपालमा उपलब्ध स्रोतको सही परिचालन गर्न नसक्नु नै बेरोजगारीको प्रमुख कारण भएको विज्ञहरू बताउँछन् । सोहीकारण अहिले दैनिक २ हजार नेपाली युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश धाइरहेका छन् । उद्यमशीलतामा अगाडि रहेको मुलुकले मात्र आर्थिक उन्नति गरेको देखिन्छ । उद्यमशीलताले जमीन, जनशक्ति र लगानीको सदुपयोग गर्छ । कुनै पनि मुलुक विकसित हुनुमा उद्यमशीलताको विकास नै प्रमुख कारण हो ।
स्वरोजगार हुन के गर्ने ?
उद्यमशीलता घरमै उत्पन्न हुन्छ । परिवारमा प्रत्येक दिन आफ्नै व्यवसाय थाल्नेसम्बन्धी छलफल थालनी गरेमा व्यवसायका लागि पृष्ठभ्ूमि तयार हुँदै आउँछ । यसैगरी विश्वप्रसिद्ध व्यक्तिका सफलताका कथा र उनीहरूका बायोग्राफी अध्ययन गर्ने बानी बसालियो भने स्वरोजगार हुन प्रेरणा मिल्छ । अरूको ज्ञान र शीपलाई आफूअनुकूल प्रयोग गरियो भने त्यसले सफलतामा इँटा थप्ने काम गर्छ ।
कुनै क्षेत्र वा कामको अनुभवले पनि मानिसलाई स्वरोजगार बन्न प्रोत्साहन गर्ने गरेको पाइएको छ । कुनै ठाउँमा २÷४ वर्ष काम गरिसकेपछि त्यसैको अनुभवको आधारमा आफ्नै व्यवसाय थालनी गर्न बाटो खुल्न सक्छ । त्यस्तै, कार्यक्षेत्रमा देखिएका असन्तुष्टिलाई शक्ति र सोचको रूपमा विकास गरी स्वरोजगारको मार्ग प्रशस्त गर्न सकिन्छ ।
सन्तुष्टि सदा सुख हो कि प्रगतिको बाधक भन्ने विवाद कायम नै छ । सन्तुष्टि, नाफा र सफलताको परिभाषा व्यक्तिअनुसार फरक हुने गर्छ । प्रगति गर्न चाहने र जिविका मात्र चलेर हुँदैन भन्ने सोच आफूमा विकास गर्न सकियो भने स्वरोजगार हुन आफै पे्ररित भइन्छ ।
शिक्षाको दिक्षाका क्रममा आफूले चाहेको वा आफूले इच्छा गरेको विषय वस्तुको सही चयन गरेमा पनि स्वरोजगार हुन सघाउ पुग्छ । विषयवस्तुको पूर्ण ज्ञानले आत्मविश्वास प्रदान गर्दै स्वरोजगारीप्रति प्रेरित गर्छ ।
यसबाहेक आफ्नै व्यवसाय थालनी गर्नुभन्दा पहिले व्यवसायको योजना बनाउनु आवश्यक छ । व्यावसायिक योजनाभन्दा पनि महŒवपूर्ण कुरा दृढ सङ्कल्प हो । यो गरेरै छाड्छु भन्ने सोच आफूमा हुनु अपरिहार्य छ । साथै, हिँड्दा लडिन्छ भन्ने हेक्का हुनैपर्छ । तसर्थ, होशियारीपूर्वक पाइला चाल्ने र लडिहालेमा कसरी उठ्ने भन्ने योजना बनाउनुपछ ।
व्यवसाय थाल्नुअघि आफ्नो मनको परीक्षण गर्नुपर्छ । आफ्नो इच्छालाई मारेर व्यवसाय थालियो भने यसले असफलता हात पर्ने सम्भावना रहन्छ । तसर्थ, आफ्नो इच्छा चाहना र लक्ष्यलाई दृष्टिगत गरी त्यसलाई कसरी व्यावसायिक बनाउने भने सोच्नु आवश्यक छ । यसपछि बजारको अध्ययन, सम्बन्धित विषयवस्तुको बारेमा खोजीनीति गर्नुपर्छ । साथै, आफूले गर्न लागेको व्यवसायका बारेमा प्रशिक्षण परामर्श लिँदा झन् आफूलाई सबल बनाउन सकिन्छ ।
स्वरोजगार हुँदा के फाइदा हुन्छ ?
स्वरोजगार हुँदा समय र आम्दानी आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्न त मिल्छ नै, साथमा मानिसको आन्तरिक विकास हुन्छ । यसका अलावा चुनौती झेल्न सक्ने क्षमताको वृद्धि भई आफूलाई झन् प्रबल बनाउँछ । मालिक वा बोसको अधीनमा नरही स्वतन्त्र जीवनशैली अपनाउन पाइन्छ । आफ्नो शीप र क्षमता आप्mनै लागि सदुपयोग हुँदा बेग्लै आनन्दको अनुभूति हुन्छ ।
आफ्नै त हो नि भनेर हेलचक्र्याइँ गर्न थालियो भने यसले उठ्नै नसक्ने गरी लड्ने सम्भावना पनि हुन्छ । तसर्थ, अनुशासित, संयमित, मितव्ययी हुनु आवश्यक छ । साथै, एकाग्रता र आत्मविश्वास बढाउनुपर्छ । चुनौतीको सामना गर्नेे क्षमताको विकास गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । उद्यमका लागि अर्थव्यवस्था मिलाउन पूर्वतयारी हुनुपर्छ । त्यसैले, बैङ्किङ निकाय, सहकारी, इष्टमित्र, सरकारी निकायसँग सम्बन्ध विस्तार गरी आर्थिक आधार तयार गरी राख्नुपर्छ । व्यवसाय थाल्दा कतिपय व्यवसायी सरकारी नीतिनियम र कानूनको अज्ञानताले फान्दामा परेका उदाहरण धेरै छन् । त्यसकारण, आफूले गर्न लागेको व्यवसायसँग सम्बन्धित नीतिनियम र कानूनमा अपडेट भइरहनुपर्छ ।